मनसुनले नेपालमा यो के गर्‍यो ? (भिडियो) - Enepalese.com
मनसुनले नेपालमा यो के गर्‍यो ? (भिडियो)
इनेप्लिज २०७४ असार २४ गते ११:३० मा प्रकाशित
नेपालको हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा पछि निर्माण भएको भौगर्विक बनोट हो । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि निर्माण भएको भाग कमजोर हुन्छ । त्यसैले, धेरै पहिरो जाने देशमा नेपाल पनि पर्छ । भूक्षयले भौगोलिक बनोटलाई कमजोर बनाउने भएकाले पहिरो बढी जान्छ । २०७४ सम मा मनसुनले नेपालमा यो के गर्‍यो ?
यो भिडियो हेर्नु होस् :